June 12, 2021 - Channel Lover
MMA ဖိုကျတာ ဖိုးသျောရဲ့ဖှငျ့ဟ ဝနျခံခကျြအပွညျ့အစုံ
June 12, 2021 by Channel Lover
MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်ရဲ့ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်အပြည့်အစုံ ဘဝကို Zero က နေပြန်လည်စတင်သွားမယ်လို့ MMA ဖိုက်တာ ဖိုးသော်က ပြောပါတယ်။ သူ့ Gym ခန်းမမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်လက်လုပ်မိုင်းစမ်းသပ်ရင်း ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဝန်ခံခဲ့သလို အခြားသော အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ဆောင်တဲ့အခြားသူတွေရဲ့လုပ်ရပ်ကိုလည်း မနှစ်မြို့ကြောင်း ဖွင့်ဟပါတယ်။ လက်နက်နဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖွင့်ဟခဲ့သလို ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေဖြစ်ကြောင်း နားလည်ခံစားမိပြီလို့ ဝန်ခံပြောကြားသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မကြာခင် ရုပ်သံနဲ့တကွဖော်ပြပေးပါမယ်။#Neo Politics #ဖိုးသော် #phoethaw #ဖိုးသော်ရဲ့ဝန်ခံချက် Unicode Version MMA ဖိုကျတာ ဖိုးသျောရဲ့ဖှငျ့ဟ ဝနျခံခကျြအပွညျ့အစုံ ဘဝကို Zero က နပွေနျလညျစတငျသှားမယျလို့ MMA ဖိုကျတာ ဖိုးသျောက ပွောပါတယျ။ သူ့ Gym ခနျးမမှာဖွဈခဲ့တဲ့ … Read more
သရုပျဆောငျ မိုးဟကေိုနဲ့ ခငျပှနျးဟောငျးတို့၏ အမှခှေဲတမျးအရှုပျတျောပုံ သရုပျဆောငျ မိုးဟကေို၏ ခငျပှနျးဟောငျးမှ နှဈဦးပိုငျပစ်စညျးအား ပွငျဆငျရောငျးခခြွငျး မပွုလုပျရနျ နိုငျငံပိုငျ သတငျးစာတှငျကွညော သရုပျဆောငျ မိုးဟကေို၏ ခငျပှနျးဟောငျးမှ တရားဥပဒအေရ နှဈဦးပိုငျပစ်စညျး ဖွဈနဆေဲ မွနှေငျ့နှဈထပျတိုကျအား သရုပျ ဆောငျ မိုးဟကေိုမှ ပွငျဆငျပွု လုပျနသေညျ့အတှကျ ထိုပွငျ ဆငျမှုကို ဆကျမပွုလုပျရနျ ရှနေ့ကေတဆငျ့ နိုငျငံပိုငျသတငျးစာတှငျ ကွညောလိုကျသညျ။ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး တရားလှတျတျော တရားမကွီးအမှုအ မှတျ ၁၄/ ၂၀၁၃ တှငျ ဦးညီညီထှနျးက ဒျေါအေးအေးခိုငျ (ခ) သရုပျဆောငျ မိုးဟကေို အပျေါ လငျမယား ကှာရှငျးပေးစလေိုမှု နှငျ့ နှဈဦးပိုငျပစ်စညျး ခှဲပေးစလေိုမှုကို စှဲဆိုခဲ့ရာ(၈.၈. ၂၀၁၃) ရကျတှငျ တရားဝငျ လငျမယား ကှာရှငျးပွတျစဲကွောငျး ဒီကရီ … Read more
ပရိတသှတကှီးရေ…ပှညသှူခစှအှနုပညာရှငတှဈယောကဖှဈတဲ့ ပိုပိုကတော့ သီခငှးအေးအေးလေးတှကေို ခှိုသာတဲ့အသံလေးနဲ့သီဆိုဖှောဖှရငှေး ပရိတသှတအှားပေးမှုကို အပှည့ပှဝရရှိခဲ့တဲ့သူတဈယောကပှဲဖှဈပါတယှ။ အဆိုတောပှိုပိုက လတတှလောမှနမှာနိုငငှံမှာဖှဈပေါနှတေဲ့အခှအနနေေဲ့ပတသှကပှီးပှညသှူလူထုနဲ့အတူသူမ တတနှိုငတှဲ့ဘကကှနအပှညအှေ့ဝတဈသားတညှးရပတှညပှေးခဲ့တဲ့သူလညှးဖှဈပါတယနှော။ အခုလိုမှိုးလူထုလှုပရှားမှုမှာပါဝငခှဲ့တဲ့အတှကှ ပုဒမှ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှင့ဝှရမှးထုတခှံခဲ့ရပှီး သူမရဲ့နအေိမမှာပဲဖမှးဆီးခံလိုကရှတာဖှဈပါတယှ။ပိုပိုတဈယောကဖှမှးဆီးခံလိုကရှတဲ့ အခှိနမှာ သူမကိုခစှတှဲ့ပရိတသှတတှဟောဆိုရငှ အလှနပှဲဝမှးနညှးကှကှေဲခဲ့ကှရတာပဲဖှဈပါတယှ.။ ဒီတဈခါမှာဆိုရငလှညှးအဆိုတောပှိုပို ရဲ့သတငှးမှားတှေ မကှာခဏ တကနှပမေေဲ့ သူမဟာ အငှးစိနှ ထောငအှတှငှး ကနှးမာစှာရှိကှောငှး မနေ့ ဇှနလှ ၁၀ ရကနှမှေ့ာ ကိုယတှိုငှ ထောငဝှငစှာသှားတှခေဲ့သူ မိသားစုဝငကှ အခုလိုပှောပှခဲ့ပါတယှ။ ” ပိုပို ကနှးမာရေးလညှးကောငှးတယှ၊ ဖဘှေ့တခှမှာ တကနှသလေို ရူးလညှး မရူးသှား သလို၊ သလညှေး မသပေါဘူး ၊ အစစ အရာရာ အဆငပှပေါတယှ။ ပိုပို နဲ့ အတူ အခှား အနုပညာရှငတှလညှေးရှိတော့ သူတို့အားလုံးလညှး ကနှးမာရေးကောငှးကှတယှ။ တခှား ထှထှထေေူးထူး … Read more
နဈနာစတေဲ့ အခဈြမြိုးဖွဈအောငျ မခဈြကွဖို့ သတိပေးလိုကျ တဲ့ ပုညခငျ
နဈနာစတေဲ့ အခဈြမြိုးဖွဈအောငျ မခဈြကွဖို့ သတိပေးလိုကျ တဲ့ ပုညခငျ… လှနျခဲ့တဲ့နှဈတှကေတညျးကရငျသပျရှု့မောဖှယျ ဇာတျအခြိုးအကှအေ့ဖှဲ့အနှဲ့အသုံးအနှုနျးတှနေဲ့ ဝတ်ထုစာအုပျပေါငျးမြားစှာထုတျပွီးပရိသတျတှေ ရငျထဲကိုဝငျရောကျလာခဲ့တဲ့ပုညခငျဆိုတဲ့ စာရေးဆရာမကိုလူတိုငျးနီးပါးသိကွမှာပါ။ ပုညခငျဟာစာရေးဆရာမသကျသကျတငျမဟုတျ၊ ဇာတျညှနျးတှကွေုံရငျရေးသားသူလညျးဖွဈတဲ့အပွငျစာအုပျတှထေဲမှာ လူငယျတှအေတှကျခဈြမှုရေးရာအကွံပေးစကားတှလေညျး အားရှိစရာထညျ့သှငျးရေးသားတတျတဲ့ အားကိုးခငျြစရာအခဈြရေး အကွံပေးတဈဦးလညျးဖွဈပါသေးတယျ။ ပုညခငျက မီဒီယာတှနေဲ့အငျတာဗြူးမှာ အခဈြအပျေါ ခံယူခကျြတှနေဲ့ လူငယျတှအေတှကျ အကွံပေးစကားအခြို့ကို ဖွကွေားထားပေးပါတယျ …။ ပုညခငျကသူမရဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာအပျေါ ရှု့မွငျပုံကို “အခဈြဆိုတာကတော့အနညျးဆုံးတော့တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ လူဆိုတာ အတ်တမကငျးဘူး ဆိုပမေယျ့လညျး အတ်တကို လြှော့ပွီးတော့တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျညှိုနှိုငျးရမယျ့အရာမြိုးလို့ အဈမကတော့ ထငျပါတယျ”လို့ဆရာမကပွောပွထားပါတယျ …။ ပုညခငျကသူမရဲ့အိမျထောငျရေးအကွောငျးကိုလညျး “အဈမက အသကျသုံးဆယျကြျောမှ အိမျထောငျကတြာ။ အိမျထောငျကတြော့ (၃၇) နှဈ ရှိပါပွီ။ အဈမထကျ ငယျတဲ့လူနဲ့အိမျထောငျကတြာပါ။ အဈမထကျငယျတယျဆိုပမေယျ့အဈမထကျ ရှဈနှဈလောကျငယျတာပေါ့နျော။ ငယျပမေယျ့အခု အိမျထောငျသကျက ကိုးနှဈလောကျ ရှိပါပွီ …”လို့ … Read more
June 12, 2021 June 12, 2021 by Channel Lover
လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲမှာ သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ရှိတဲ့ အဘိုးဦးအောင်အကြောင်း ဒီနေ့ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ထဲမှာ အဘိုးဦးအောင် သက်တော် ၁၀၂ နှစ်ပါပါတယ် ကုန်းဘောင်ပထမံနဝင်းဦးအောင်🙏🙏🙏 အဖိုးကိုကျမတို့ကျိုက်တလန်းအရန်စေတီထီးတော်တင်တဲ့နေ့(၂၂.၅.၂၀၂၁)မှာတောထဲကအိမ်တအိမ်မှာစဖူးတွေ့ရတာပါ🙏 ပါဠိဆရာတော်ရယ်သဲဖြူမဟာမြိုင်ဆရာတော်ရယ်ကျမတို့မိသားစုကလွဲပြီးဘယ်သူမှမလာရဘူးဆိုလို့ကျန်တဲ့သူတွေနေခဲ့ရပါတယ်… ကျမလဲအဖိုးကိုဘယ်သူမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး သဲဖြူဆရာတော်ကိုတွေ့တော့အဲ့ဒါငါ့သားငါ့သားအစစ်လို့မိန့်ပါတယ် သဲဖြူဆရာတော်ကလဲပြုံးနေပါတယ် သဲဖြူဆရာတော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖိုးနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပြပါတယ် ပါဠိဆရာတော်ရဲ့လက်ကိုမလတ်တမ်းကိုင်ထားတာပါ… ဆရာတော်တွေနဲ့ဆိုတော့ကျမဘာမှမလျှောက်ရတော့ကျမညနေတခေါက်သွားတော့အဖိုးကသိပြီးတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ် သမီးကအဖိုးနဲ့ပဌာန်းဆက်နီးလို့တနေ့ထဲနဲ့နှစ်ခါတွေ့ရတာအဖိုးကလူတယောက်မအတွေ့မခံတော့ဘူး တနေ့ထဲနဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့တာငါ့သမီးဘဲရှိတယ်လို့မိန့်ပါတယ်…. အဖိုးကဘုရားဆုပန်ပါ သူဘုရားဖြစ်ရင်တွေ့ပါစေဆုမတောင်းနဲ့တဲ့ဘဝတိုတိုနဲ့ဖြတ်ပါတဲ့ဘုရားတွေအကြောင်းတရားဟောတာနှစ်နာရီနီးပါးရှိပါတယ်🙏🙏🙏 နောက်တကြိမ်ကျမအမေကျမသားကြီးနဲ့အဖိုးစီရောက်ပါတယ် အဖိုးကကျမကိုမိန့်ပါတယ်သမီးသဲဖြူဆရာတော်နဲ့နေပြည်တော်ကပါဠိဆရာတော်သိလားတဲ့သိတယ်အဖိုးဟိုနေ့ကပါတယ်လေလို့ပြောတော့ အေး အဲ့ဒီဆရာတော်နှစ်ပါးကိုသေသေချာချာကိုးကွယ်သီလ၊သမာဓိအားကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတယ်လို့မိန့်ပါတယ်🙏 ကျမကိုအဖိုးကသမီးကိုဒါနအကြောင်းဟောမယ်သေစေချာချာနာနော်တဲ့ သမီးကဒါနအားကြီးလို့ဟောတာလို့ပြောတော့ကျမကအဖိုးကျမကသူများတွေလိုကြီးကြီးမားမားလှူထားတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ သမီးအကြီးကြီးလှူမှမဟုတ်ဘူးသမီးကဒါနအားကောင်းတယ်ဒါနပါရမီမပြည့်ရင်ကျွတ်တမ်းဝင်ဖို့မလွယ်ကြောင်းပြောပြီးဒါနလေးမျိုးဟောပါတယ်🙏 အဖိုးကိုတချို့ကအသက်နှစ်ရာကျော်ပြီကုန်းဘောင်ခေတ်ကအဘဘိုးဘိုးအောင်ကယ်သွားတဲ့စင်္ကြာမင်းလေးလို့လဲပြောပါတယ်… အဖိုးကကျမကိုပြောတာတော့သူကမြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၂၀၁)ခုနှစ်မှာမွေးတယ်လို့ပြောပါတယ်… ရသေ့ကြီးဦးခန္ဓီကငါ့ထက်ဒါနအားကြီးတယ် ငါကစရဏမှာသူ့ထက်အားကြီးတယ်လို့မိန့်ပါတယ်… အောင်လေးအောင်မှာအဖိုးကအငယ်ဆုံးပထမံနဝင်းဦးအောင်ပါ🙏 အဖိုးကဘာရောဂါမှမရှိပါဘူးနားနဲနဲလေးတာကိုဘာကြောင့်လေးလဲဆိုအဖိုးမှာလွယ်အိတ်တလုံးရှိတယ်ငွေလိုရင်အိတ်ထဲနှိုက်ရင်လိုသလောက်ရတယ် အဲ့ဒါလူတချို့သိပြီးအဖိုးခေါင်းကိုချည်းဘဲရိုက်ပြီးအိတ်ကိုလုသွားတယ် သူတို့မသိလို့ဒီအိတ်ကအဖိုးတယောက်ဘဲနိုက်လို့ရတာကျန်တဲ့သူနိုက်ရင်ပိုက်ဆံကမထွက်ဘူးတဲ့ 1972 နှစ်မှာဗိုလ်ချူပ်ကြီးနေဝင်းကအဖိုးကိုဖိုးဖိုးလို့ခေါ်တယ်လို့မိန့်ပါတယ် အတွင်းရေးမှူး(၂)ဦးတင်ဦးကိုဒီတခါခရီးထွက်ရင်ငါ့သားပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမိန့်ပါတယ် တကယ်လဲရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်အဖိုးကပျောက်သွားတာအခုချိန်ထိဘယ်သူမှအဖူးမခံတော့တာပါ… အဖိုးကိုသုံးကြိမ်မြောက်ဖူးတဲ့အချိန်မှာအဖိုးကမိန့်တယ်။ လူတွေကအဖိုးကိုဟိုပါတီဒီပါတီကလို့စွပ်စွဲကြလိမ့်မယ်အဖိုးကဘယ်ပါတီမှမဟုတ်ပါဘူးအဖိုးကဘုရားပါတီပါ အဖိုးကဗေဒင်ယတြာမပေးပါဘူးတဲ့တကယ်လဲကျမတို့ကိုဘာလုပ်ညာလုပ်မပြောဘူးတရားများများထိုင် မထိုင်နိုင်ရင်ပုတီးများများစိတ်လို့ဘဲမိန့်ပါတယ် အဖိုးပြောတဲ့အတိုင်းပါဘဲလူလုံးဝအတွေ့မခံတဲ့အဖိုးကိုအခုခန္ဓာဝန်ချမှဟိုပါတီဒိပါတီ၊ဟိုလူကြီးဒီလူကြီးကိုယတြာလုပ်ပေးတာလို့စွပ်စွဲခံရတာပါဘဲ😢 ၄ ရက်နေ့ကအဖိုးဆေးရုံမှာဆေးလာစစ်တော့ကျမကလွဲပြီးဘယ်သူမှမတွေ့ပါဘူး ကျမကိုဖုန်းဆက်တော့ကျမအကျင့်ကလူတိုင်းကိုဖူးစေချင်တော့အဖိုးကိုမလျှောက်ဘဲသူငယ်ချင်းတွေခေါ်သွားတော့ဆယ်မိနစ်နဲ့ပြန်ခိုင်းပါတယ် အဲ့ဒီမှာသူငယ်ချင်းခင်ပွန်းကိုသိန်းကျင်ကသူ့အဖေဆေးရုံတက်နေတာအခြေနေမေးတော့ပြီးပါပြီ လို့မိန့်ပြီးတရက်ခြားမှာကိုသိန်းကျင်အဖေဆုံးသွားပါတယ်… ၇ ရက်နေ့မနက်သဲဖြူဆရာတော်နဲ့အဖိုးစီသွားတော့အဖိုးကဘယ်သူမှပေးမလာပါဘူး … Read more
ယနေ့ မိုးကြီးမည့်မြို့များ(အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ)
ယနေ့ မိုးကြီးမည့်မြို့များ(အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ) ရေး သံဖြူဇရပ် ကျိုက်ခမီ ဘီလူးကျွန်း ချောင်းဆုံ မော်လမြိုင် မုဒုံ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အခြေအနေ။ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဩရိဿကမ်းခြေနှင့် အနောက်ဘင်္ဂလားကမ်းခြေတို့အနီးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသောလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(Low Pressure Area)သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းရာမှ အားအလွန်ကောင်းနေပါသည်။ ထူးခြားသည့်အခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၅:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်းငယ်သည် ဟိုင်နန်ကျွန်းကို ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိပြီး၊ အနောက်- အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာ ကျဲကျဲ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် … Read more